बीमा कम्पनीहरुको प्रतिष्पर्धा बढेपनि जनतामा पुग्न नसक्नुको कारण के ? || समाचार
बीमा कम्पनीहरुको प्रतिष्पर्धा बढेपनि जनत...
बीमा कम्पनीहरुको प्रतिष्पर्धा बढेपनि जनतामा पुग्न नसक्नुको कारण के ?
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुबीच निक्कै प्रतिस्पर्धा चलेको छ । कम्पनी खोल्नेहरु बीचको प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्रमा राम्रै मुनाफा हुँदो रहेछ भनेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तर बीमा कम्पनी जुन उद्देश्यका साथ खोलिएको हुन्छ त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्पm बीमा कम्पनी वालाहरुको ध्यान पुगेको पाइदैन । खासगरी जनताको आकर्षण बीमा तर्पm नहुनुको कारण यही हो जस्तो लाग्छ । नेपाली बीमाको इतिहास ७ दशक पुरानो भइसकेको छ । तर बीमाको पहुँच भने अझै पनि धेरै नागरिकमा पुग्न सकेको पाइदैन ।
२ वर्ष अघिसम्म ७ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै बीमाको पहुँच सीमित थियो । अहिले २७ प्रतिशत नागरिक (वैदेशिक रोजगार समेत) बीमाको दायरामा आएको दावी गरिएको छ । बीमाको पहुँच यसरी विस्तार हुनुमा नयाँ बीमा कम्पनीहरुको राम्रो योगदान हो भन्ने मूल्यांकन बीमा समितिको रहेको पाइएको छ । तर यस्तो मूल्यांकन के आधारमा गरियो भन्ने बारे बीमा समिति स्पष्ट भएको पाइदैन । बीमा कम्पनीहरुको अनुगमनका लागि स्थापना भएको बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरिरहेको भएपनि कम्पनीहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अनुशासनको दायरामा राख्न समिति सफल हुन सकेको पाइदैन । यसमा समितिको कमजोरी भन्दा पनि कम्पनी वालाहरुको लापर्वाहीपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले बीमा बजारमा अराजकता पनि मच्चाइरहेका छन् । पुराना बीमा कम्पनीहरुलाई भर्खरै स्थापना भएका कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाका लागि टक्कर दिन थालेका छन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरु परम्परागत ढंगले चल्ने हो भने अब उनीहरुको व्यवशायलाई चुनौति थपिएको छ ।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका निक्कै पुराना केहि कम्पनीलाई पनि कतिपय नयाँ कम्पनीहरुले बीमा शुल्क आर्जनमा उछिनेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६ ÷ ७७ मा १९ वटा बीमा कम्पनीहरुले ९४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको तथ्यांकमा जनाइएको छ । यसमा नयाँ थपिएका बीमा कम्पनीहरुको योगदान १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यो तथ्यांकले पनि पुराना बीमा कम्पनीहरुको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुका समस्या आफ्नै किसिमका रहेका छन् । कम्पनीहरुको संख्या बृद्धि भएपद्धि प्रतिस्पर्धा चुनौतिपूर्ण हुनु पनि स्वाभाविक हो । तर जनताको बीचमा लोकप्रिय कम्पनी बन्नका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले विश्वास आर्जन गर्ने पर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा विश्वास आर्जन भनेको जनतामाथि आर्थिक भार नथोपरेर सम्झौता अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने नै हो । कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका सुविधाका प्रलोभन देखाएर सदस्यहरुको संख्या बढाउने गरेका पाइन्छन् । तर सम्झौता अनुसारका सुविधाहरु दिन आलटाल गर्ने र बिलम्ब गरेर सताउने गरेका गुनाशाहरु प्रशस्तै सुनिन्छन् ।
बीमा कम्पनीहरु यथार्थमा भन्ने हो भने ग्रामीण भेगमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण भेगका जनतासँग घुलमील हुन सक्नु पर्दछ । अहिलेको समय ग्रामीण जनतामा चेतनास्तर माथि उठाउन पनि बीमा कम्पनी जस्ता सेवाप्रदायक कम्पनीको योगदान महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । बीमा कम्पनी अर्थतन्त्रकै एउटा पाटो भएकाले जनस्तरमा यसको पहुँच आवश्यक हुन्छ ।
बीमा सेवा हो, व्यापार होइन भन्ने कुरा बीमा कम्पनीवालाहरुले आत्मसात गरेर यो सेवामा प्रवेश गर्नु पर्दछ । नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनु अघि कम्पनीवालाहरुलाई यो सवालमा प्रतिबद्ध बनाउन जरुरी छ । पुँजी सानो भएको र कम्पनी पनि विश्वास कम भएको अवस्थामा पनि सेवा प्रभावकारी हुने हो भने ठूलो लगानीका कम्पनी समेत जनसेवाका लागि प्रतिस्पर्धामा जान बाध्य हुन्छन् ।
बीमाको पहुँच राम्रो भयो भने जनता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । जनता आकर्षित भए भने बीमा कम्पनीहरुको लोकप्रियता पनि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । — जनधारणा साप्ताहिकबाट
उपत्यकामा थपिए ६३७ कोरोना संक्रमित
थप सात काेराेना मृतकसहित कुल काेराेना मृतक सं...
मंसिरमा क्यानद्वारा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना...
थप १८९३ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
कथानक चलचित्र ‘सत्यम’ निर्माण हुने